Warbixin: Muxuu Farmaajo isugu sahaa Adan Cabdulle Cismaan? | KEYDMEDIA ONLINE
29 November 2021 Talo walaalnimo oo ku wajahan Boqor Buurmadow
29 November 2021 Muxuu Rooble kala hadlay Guddiyada Doorashooyinka
29 November 2021 Boqor loogu baaqay bixinta magta dadkii ay dileen Al-Shabaab
29 November 2021 “Adiga iyo Jawaari Farmaajo idin ma rabo” Xildhibaan Idiris
29 November 2021 Fahfaahin: Qarax ka dhacay magaaladda Muqdisho
29 November 2021 Muxuu salka ku hayaa safarka Farmaajo ee Qatar?
29 November 2021 Qarax culus oo ka dhacay Muqdisho
29 November 2021 Xiisada u dhaxeysa Deni iyo PSF oo xooggeysatay
29 November 2021 Muxuu yahay Balan-qaadka Rooble u sameeyay Musharixiinta?
29 November 2021 Halkee marayaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya?
29 November 2021 Sidee looga fal-celiyey kulankii RW Rooble iyo Mucaaradka?
29 November 2021 Tacsi: Inaa lillaahi wa inaa ileyhi raajicuun
28 November 2021 Maxaa kasoo baxay Kulankii Rooble iyo Mucaaradka?
28 November 2021 Bur-burinta Goobaha Ganacsiga Muqdisho oo isa-soo tareysa
28 November 2021 Barakacayaal soo gaaray Duleedka Muqdisho
28 November 2021 U jeedka kulanka u socda Mucaaradka iyo RW Rooble
28 November 2021 Boob iyo kala amar qaadasho la’aan ka socota Baydhabo
28 November 2021 Boobka qaran badbaado qaran ayaa hor istaageysa - Turyare
Warbixin: Muxuu Farmaajo isugu sahaa Adan Cabdulle Cismaan?
Bulshada Soomaaliyeed ayaaa la yaab iyo amakaag ku tilmaantay in mid ka mid ah Madaxweynayaashi ugu liitay ee soo mara dalka uu isla meeldhigo Madaweynihii ugu muhiimsanaa gayiga Soomaalida taariikhda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddadu ka dhamaatay ee Soomaaliya Maaxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa billaabay olole doorasho, wuxuuna aaminay in waddada kaliya ee u furan ay tahay marin habiin bulsho oo ku aaddan waddaniyad sheegasho aan waxba ka jirin.
Farmaajo oo afartii sano ee laa soo dhaafay galay gabbood-fallo aan hore gayiga Soomaaalda uga dhicin, isla-markaana gabey guud ahaan howlihii loo igmaday, ayaa mar kale doonaya inuu qaab indho sarcaad ah ku qaato xilka ugu sarreeya dalka.
Doorashadii uu ku soo baxay afar sano ka hor, wuxuu ku ololeeyay waxa loo yaqaan Itoobiyaan nacayb, hayeeshee, waxaa loo diiwaan galiyay inuu yahay Madaxweyniihii xiriirkii ugu xoogganaa la yeeshay hoggaanka Itoobiya.
Wuxuu madaxtooyadiisa labaad ka dhigtay Addis Ababa, wuxuuna markii ugu horreysay muwaadiniin xornimo doon ah gacanta u galsahy Xabishida, ka hor inta uusan kumanaan dhalinyaro ah si khiyaano iyo khasab isugu jira uusan uga dagaal galin waqooyiga Itoobiya.
Wuxuu xiriirkii waalaalnimo ee Jabuuti ku badashay saaxiibtinimada Isaias Afwerki, ka hor inta uusan diblumaasiyaddii soo jireenka ahayd ee Keyna, Emaaraatka, Masar iyo Sucuudi Carabiya ku tuman.
Farmaajo, wuxuu noqday Madaxweynihii ugu horreeyaay ee kursiga isku dhajiya labaatankii sano ee la soo dhaafay, waxaana loo dhiiwaan galiyay hoggaamiyihii koobaad ee xilka qoray ku doonay tan iyo hoggaamiye kooxeedyadii.
Dhacdooyinka la diiwaan galiyay oo dhamaantood ah kuwo dhiillo xambaarsan soona xiray dhamaan irdihii kale, waxay sababeen in Farmaajo isku saho Madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabduule Cismaan, isagoo sheegana inuu la mid yahay, marka la eeggo waddaniyadda iyo dal jacaylka.
Haddaba, Su’aalaha is wediinta mudan ayaaa ah, Allaha u naxariistee Madaxweyne Aadan Cadde, ma halgaamaa Soomaaliyeed ayuu u garaba duubay cadowga Soomaaliya? Ma ciidamo Soomaaliyeed ayuu ugu deeqay difaaca Itoobiya? ma dadka ka aragtida duwan ayuu ku duulay? ma dastuurka dalka u yaalla ayuu ku tuntay? ma kursiga ayuu isku dhajiyay,? mise magaalooyin Soomaaliyeed ayuu go’doomiyay, si hooyiiyinku u umul raacdaan?
Intaas iyo in ka badan oo Farmaajo caan ku yahay, Aadan Cadde, waligiis looma qorin, hayeeshee, waxay arrintu u muuqataa in la waayay meel kale oo Farmaajo ciirasan karo, bulshadana ku beer laxawsan karo, Ma aha Madaxweyne Aadan in afka la ga sheegto ee waa in dhaqankiisa lala yimaado.
Farmaajo, wuxuu hore si toos ah ugu gafay AUN, MW Aadan, wuxuuna bogga 50-aad ee buuggii uu kaga qalinjebiyey marqaatiga labaad ee Jaamacadda, ku xusay in Aadan Cadde uu ahaa adeege gumeysi, isla-markaana ay qabiilkiisu gacansaar la lahaayeen isticmaarkaa.
Waxaa jira warar aan la xaqiijin runtooda oo sheegaya in maalmaha soo socda ay maamulka TPLF, soo bandhigayaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ay ku qabteen dagaalkii gobolka Tigray, taas oo khasab ka dhigi doonta in Farmaajo lagu eedeeyo Khiyaaano qaran, laga hor istaago qabashada xil umadadeed loona maxakamadeeyo danbiga uu galay.
Talo walaalnimo oo ku wajahan Boqor Buurmadow
Warar 29 November 2021 20:26
Waxaa saacadihii ugu danbeeyay sare u kacay dadka ku baaqaya inuu ka garaabo hadal dhawaan uu yiri , Boqor Cismaan AW-Maxamuud Maxamed [Buurmadoow], kaas oo loo arkay qadar digasho ah oo lagu durayo Kofurta Soomaaliya.
Muxuu Rooble kala hadlay Guddiyada Doorashooyinka
Warar 29 November 2021 18:56
Boqor loogu baaqay bixinta magta dadkii ay dileen Al-Shabaab
Warar 29 November 2021 17:50
“Adiga iyo Jawaari Farmaajo idin ma rabo” Xildhibaan Idiris
Warar 29 November 2021 17:04
Boobka doorashada “Beesha Caalamkaa” raalli ka ah
Warar 29 November 2021 4:48
12-kii April, markii Farmaajo, samaystay muddo kodhitii labada sano, [Sharci-darro], Beesha Caalamka, lama imaan qorshe cad, waxa ay kaliya ku celceliyeen, in dib-u-dhac doorasho, mid is-barbar socota iyo muddo kordhin aan la aqbali doonin.
Ku dhawaaqista natiijada kursiga HOP067 oo la hakiyay
Farmaajo mushaar xalaal ah ma qaataa?
Doorasho, xulasho, magacaabid, maxaa ka socda Soomaaliya?
Maamulka Puntland oo qarka u saaran inuu dagaal ka qarxo